Somali Youth Development Organization - News: VUOSAARI oo ku guulaysatay koobkii Futsalka Magaalada Helsinki
June 20 2018 23:15:08
VUOSAARI oo ku guulaysatay koobkii Futsalka Magaalada Helsinki
Kooxda vuosaari ayaa ku guuleystay tartankii Helsinki Futsal Tournament (HFT 2012) 20.10.2012 markii 1 iyo 0 kaga badisay kooxdii Fc länsi helsinki, tartankaan oo ay ka qeybgaleen 9 kooxood ayaa wuxuu mudo hal maalin ah ka socoday caasimada dalka Finland ee Helsinki kaasoo ay soo qabanqaabiyeen Ururka dhaqanka iyo Isboortiga ee dalka Finland (Socus ry).
Munaasabadii furitaanka waxaa ka hadlay Maxamed ibrahim (Gurey) oo ka shaqeeya dowlada hoose ee magaalada Helsinki qaybta dhalinyarada ahna shaqsiga keliya ee inta badan u adeega dhalinyarada, kaasoo sheegay in ay mar kastaba diyaar u yihiin wax alla waxii lagu hormarinaayo dhalinyarada.
Muqtar Abiib oo sanadkan u sharxan golaha deegaanka magaalada helsinki ee Dalka Finland muqtar oo ah shaqsi u diyaar ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu wax la qabto Bulshadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradda siiba jiilalka soo koraayo, Mr Abiib wuxuu dhalinyarada ku dhiira galiyay in ay wax bartaan sababtoo ah waxbarashada waxay idinka caawineysaa noloshiina iyo sidaad ula noolaa laheydeen bulshada aad u soo guurteen.
Waxaa halkaa hadalo qiima leh ka soo jeediyey Xoghayihii hore ee Ciyaaraha Fudud Cumar Ahmed jamac ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay joogteeyaan isbortiga oo ah aalada isku keeni karta bulshada, Kuna Dhiirigaliyey dhalinyarada in ay ka qayb qaataan isboortiga noocyadiisa kala duwan.
Waxaa halkaa lagu bixiyey abaalmarinadii iyadoo sanadkan 2012 loo gartay in uu noqdo Tababarihii sanadka Axmadey Coloow oo muujiyey karti iyo dadaal una dhabar adeygay sidii uu u hormarin lahaa dhalinyarada ka tirsan kooxdii uu tababaraha u ahaa ee Benaadir Fc.
Waxaa isna halkaa lagu gudoonsiiyey tababarihii labaad ee 2012 Hashim sheeq hassan oo ah shaqsi u diyaar ah in uu mar walba tababar siiyo ciyaartoyda da,da yar waana tababaraha kooxda kanus Fc.
Cayaartoygii ugu wanaagsanaa waxaa loo gartay in uu noqdo ciyaartoy ka tirsanaa kooxda Vuosaari oo aheyd kooxdii koobka ku guuleysatay Mubaarak Suleiman oo ahaa kabtankii Kooxda.
Goolhayihii ugu wanaagsanaa waxaa loo gartay Guled Adan, waxaa kaloo abaalmarin lagudoonsiiyey shaqsigii ugu aqlaaqda badnaa Saciid Adan (Saciid Dheere) , Kooxdii ugu asluubta wanaagsaney waxaa loo gartay kooxda Länsi Helsinki , Musharaxa Muqtar Abiib oo la gudoonsiiyey bilad sharaf , waxaa kaloo lakala gudoonsiiyey kooxihii ku guuleystay kaalinta koowaad iyo labaad.
Waxaa soo qatimaya munaasabadii Gud- ururka dhaqanka iyo Isboortiga ee dalka Finland (Socus ry) Axmed Abdullahi (Imad) kaasoo ballan qaaday in uu sii wadi doono horumarinta Isboortiga ee wadanka Finland isla markaana sanadka danbe ayuu sheegay iney balaarin doonaan tartankaan.
Xafladan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf oo kala ahaa Cumar Axmed Jamac , Eng: Awey Abukar , Caaqil Maxamuud, Cabdi deeq, C/qadir biyoonde , maxamed c/lle, Maxamed Ibrahim Gurey, Cali Shariif ,Axmadey colow, Cabdulkadir ,c/fatax.Abaajibil sntv, Maxamed Muse Radio warsan.
· shiikha on 23/10/2012 13:24:09 ·
Render time: 0.63 seconds 2,960,815 unique visits